Webmaster | Warfaafiye	Home
Stories written by Webmaster	Burcad wali dhac ku haysa Soomaalida koofur Africa
Waxaa wali ka sii socda Dalka Koofur Africa dhaca lagu hayo Soomaalida Koofur Africa ka ganacsata kadib markii habeenkii Xalay Kooxa Burcad Koofur Africa ka soo jeeda boob u gaysteen Tukaama ay lahaayeen Ganacsato soomaali ah. Kooxa tuuga ah ayaa dhac kula kacay tukaama dhoor ah oo ku yaala Magaalada Captwon ee Dalka koofur africa [...]
June 18th, 2013 | Posted in Somali News | Read More »
Deb khasaaro xoogan gaystay ayaa ka kacay Xalay Suuqa wayn ee Magaalada Gaarisa ee Xarunta Gobalka waqooyi Bari Kenya kaa oo ka kacay Suuq Mugdi . Booliiska gurmadka deg deg ah ee kenya ayaa gaaray gobtaa laakiin waxa ay ku guuldaraysteen in ay damiyaan debkaa oo sii xoogaystay islamarkaana dhulka la simay Goobahii ganacsiga ee [...]
Afayeenka Maamulka Jubalnad Cabdi Naasir Seeraar ayaa mar kale ku eedeeyay Dowlada Soomaaliya in Colaadaha ka jira Deegaano hoos yimaada Magaalada Jowhar ay dowlada Soomaaliya ay ka danbayso. Waxa uu sheegay Seeraar in Dowlada ay hub iskugu dhiibtay Beelaha deegaanada wada dega waxa ayna qayb ka tahay ayuu yiri Tilaabooyinka nuucaan kuwa lagu hayo Gobalada [...]
Hay,adda Badaha aduunka ayaa sheegtay in hoos u dhac wayn ku yimid weeraradii Kooxaha Burcad Badeeda Soomaaliya ku hayeen Maraakiibta isticmaasha Biyaha Soomaaaliya iyo kuwa caalamiga ah. Wax qoraal ay soo saartay Hay,dda lagu sheegay in 80% hoos u dhacay Weeraradii Burcad Badeeda Soomaalida kuwaas oo dagaalo lala galay lagu soo yareeyay. Balsa waxaa arintaa [...]
Waxaaa habeenkii Xalay aad loo adkeeyay amaniga Xarunta Madaxtooyada Soomaaaliya iyo agagaarkeeda si looga hortago Gantaalo kaga yimaada Kooxda Alshabaab oo habeen hore Duqeeyay. Ciidamada Booliis ah ayaa xalay lagu daadiyay agagaarka Madaxtooyada waxana aad loo adkeeyay amniga Xarunta Madaxtooyada oo ku sugan yahay iminka Madaxwaynaha Soomaaliya. Booliiska ayaa samaynayay roondooyin waxa ayna gaaf wareegayeen [...]
Yuusuf Xaaji oo iska casilay xilkii uu ka hayay guddiga doorashooyinka Pl
Yuusuf Xaaji oo ka tirsanaa Gudiga Doorashooyinka Puntland ayaa maanta ku dhawaaqay in uu iska casilay xubintii uu ka ahaa Gudiga Doorashooyinka Puntland. Waxa uu sheegay in uu xilkaas iska casilay kadib markii sida uu sheegay uu ku qanci waayay sida wax u socdaan oo Gudiga Doorashooyinka Puntland wax u maamulaan. Waxa uu sheegay in [...]
Wasiirad Fowsiyo oo ka warbixisay safarkii Madaxwayne Xasan
Wasiirada Arimaha Dibadda Soomaaliya ahna Raii’ sul Wasaare Ku xigeen Fowziyo Yusuf Xaaji Aadan ayaa ka warbixisay socdaalkii Madaxawayne Xasan Sheekh uu ku tagay dalka UK. Waxa ay sheegtay in Madaxawaynaha Soomaaliya ka qayb galay kulanka hordhaca wadamada G8 oo ay ka qayb galayeen dalalka dhaqaalahooda horumaray iyo madaxda Shan dal oo ka socota Africa. [...]
Xilidhibaan Xoosh oo ka warbixiyay kooxihii ku weeraray Nairobi
Waxaa habeenkii xalay Kooxa hubaysan ku weerareen Magaalada Narobi ee Dalka Kenya Mudanayaal ka tirsan Golaha Baarlamaanka Soomaaliya oo howlo shaqo u jooga Nairobi. Laba Mudane oo ka tirsan Golaha Baarlamanka Soomaaliya ayaa kooxa hubaysan waxa ay weerar ugu gaysteen Nairobi iyaga oo ka qaatay agabkii ay wateen sida laabtoobyo iyo qalab kale. Xilidhibaan Cabdullahi [...]
Xiisad Colaadeed u dhaxeysa dadka deegaanka Galcad & Shabaab
Wararka ka imaanaya Magaalada Galcad ee Degmada Gobalka Galgaduud ayaa sheegaya in xiisad Colaadeed ka aloosan tahay taasoo u dhaxaysa Kooxda Alshabaab iyo dadka deegaanka. Xiisada Colaadeed ayaa ka dhalatay sida dadka deegaanka sheegayaan Nabadoon caan ahaa oo todobaadkaan gudahiisa Kooxda Alshabaab ku dishay Magaalada Galacad kaasoo la oran jiray Cabdullahi Geeseey. Dilka Nabadoonka ayaa [...]
Maamulka G/ Hiiraan oo qaadaya duulaan ka dhan ah Al-Shabaab
Gudoomiyaha Gobalka Hiiraan ayaa sheegay in uu Maamulka Gobalka Hiiraan dhawaan ku dhaqaaqi doono in deegaanada Gobalka hoos yimaada ka sifeeyaan Kooxda Alshabaab. Cabdi faarax laqanyo ayaa tilmaamay in Maamulkiisa u dul qaadan waayay cabashooyin ka soo gaaray dadka Xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada Gobalka. Waxa uu tilmaamay in dhawaan ay [...]